အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ဘဝရဲ့ ကစားပွဲများ
15 Responses to “ဘဝရဲ့ ကစားပွဲများ”
မချောက စာအရေးကြဲလာပါတယ် ဧကန္တတော့ ဂိမ်းက မချောရဲ့စာရေးချိန်တွေကို လုယူသွားသကိုး။ ဂိမ်းကစားတာကို လက်ရှိဘ၀ပြဿနာတွေ နှိုင်းယှဉ်တင်ပြသွားတာ တော်တော်လေး ဖတ်လို့ကောင်းတယ် မချောရေ။ ပြဿနာကို စိတ်ရှည်ဇွဲသန်သည်းညည်းခံပြီး ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ ကြိုးစားလို့ ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့အရသာလည်း တကယ်ကို ချိုမြိန်လှပါတယ်။
မချောကတော့ ဂိမ်းဆော့တာတောင်မှ ပို့စ်တစ်ပုဒ်အဖြစ် ဖန်တီးလိုက်သေးတယ်။ ဘလော့ဂါပီသပါပေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂိမ်းကစားရင်း ရတဲ့ အတွေးလေးတွေက တကယ်ကောင်းတယ်။ ဟုတ်တယ်။ အမချောပြောသလိုဘဲ ဇွဲရှိရှိနဲ့ လုပ်စရာရှိတာကို ပြီးပြတ်အောင်မြင်အောင် လုပ်သင့်တယ်။
စကားမစပ်။ မီးတွေက အမချောတို့မြို့ဘက် ကူးစက်လာပြီထင်တယ်။ မိသားစုအားလုံး အခြေအနေကောင်းကြရဲ့လားမသိဘူး။
ဘေးကင်းရန်ကွာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် အမချော။
လူတိုင်းသိနေတဲ့ Angry birds ဂိမ်းကနေ ဘဝရဲ့ အခက်အခဲတွေအထိ ဆွဲယူသွားတာ လှတယ် မချော၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ အခက်အခဲတစ်ခုမှာ အချိန်တွေ ကြာလေလေ အဲဒီဟာကို ဘယ်လိုကျော်လွှား နိုင်မလဲဆိုတာ ပိုပြီး တွေ့လာလေလေ ပါပဲ၊ ဘဝရဲ့ အားမာန်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ ပို့စ်လေးမို့ နှစ်သက် မိပါတယ်..။
တိုတောင်းတဲ့ဘဝလမ်းခရီးကို ကျော်ဖြတ်ရာမှာ 'အသက်တစ်ရာမနေရ အမှုတစ်ရာတွေ့ရတတ်တယ်' ဆိုသလိုပေါ့ချောရေ။ တွေ့ကြုံရသမျှ အခက်အခဲအားလုံးကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ တစ်ခုခြင်း ကျော်ဖြတ်ရင်း နောက်ထပ်အဆင့် တစ်ဆင့်တိုးသွားဘို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အခုမှ သိတယ် ဒေါ်ချော အလုပ်များနေတာ လက်စသတ်တော့ ဂိမ်းဆော့နေလို့ကိုး...:)
ဂိမ်းကစားရာကနေ ဘလော့ဂါပီပီပို့စ်လေး ဆွဲထုတ်သွားတာ နှစ်သက်စရာ..။
မချောရေ နေကောင်းလား။ မတွေ့ဖြစ်တာတောင်ကြာပြီ။.
ဘ၀ထဲက ကစားပွဲတွေက ဟုတ်တယ် screen ပေါ်က ဂိမ်းတွေလိုပဲ။ တူတူပါပဲ။ လွယ်လိုက်၊ ခက်လိုက်တက်လိုက် ကျလိုက်။.
ဂိမ်းတွေက အဆင်မြင့်လေလေ၊ ပိုခက်ခဲလာလေလေ၊ သေချာကစားရလေလေနဲ့။.
စကားမစပ် အဲဒါကြောင့် ဂိမ်းမဆော့ရဲဘူး။ ဆော့မိရင်ရပ်မရလို့။.
ဒီGame တွေက ပရိုဂရမ်လုပ်ထားတဲ့ ထဲမှာ ကစားနေရတာပါ၊ အချိန်ကြာလာရင် ကျွမ်းကျင် ငြီးငွေ့သွားပြီး တခြားဂိမ်းပြောင်းကစား……
ဘဝGameတွေကြတော့ ……ရုန်း၍ကန်၍ ရင်ဆိုင်၍…
ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်သွားကြဖို့…… တစ်ခါတစ်လေ စိတ်မရှည်ဘူး………………………
အခုတော့ အဲ့ဒီလို တွေးတတ်ဖို့ နေနေသာသာ
ပစ်လိုက် သတ်လိုက် ဆိုပြီး
ထထယောင်နေတော့လည်း . . .
အတွေးတွေနဲ့ အတူ ဗဟုသုတလေးတွေ ရလို့ ကျေးဇူးပါမမရေ...
လူဘ၀ဆိုတာလည်း အမှန်တော့ ဂိမ်းကစားရသလိုပါပဲလေ
၃ရက်လောက်နေမှ လယ်ဗယ်တစ်ခုတက်တာ မပီးမချင်းလဲ ရေမချိုးဘူးဆိုတော့ ၃ရက်မှတစ်ခါရေချိုး နေရပုံပဲ..ငါ့အမတော့.ဟိဟိ
ချောရေ.. မဆော့တာကြာပြီ။ ခုမှ ပြန်သတိရသွားလို့ ပြန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေတယ်။
ဂိမ်းတော့ မဆော့ဘူး..ကိုရီယားကား ကြည့်တယ်..အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းပြီးမှ ရလာတဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကြောင့် ဂိမ်းစွဲကြတယ် ထင်ပါ့..ဂိမ်းအကြောင်းပို့ စ်လေးက အတွေးလေးတွေ ရစေတယ်..